I-tonal cream iyisiseko sobumba bonke, kuba ngoncedo lwayo unokuba lula ukufihla izikhumba ezininzi zekhanda, uguqa umthunzi wobuso uze wenze ulusu lobuso luhleli, kwaye naluphi na ukwenziwa okufanelekileyo. Kodwa phakathi kwezi nzuzo, umsebenzi obaluleke kakhulu kuwo wonke amabhinqa ukhetha umthunzi wesiseko. Ngoko, ufanele ukwazi ntoni xa ukhetha isiseko?
Indlela yokukhetha isiseko, ngokuqwalasela iimpawu zesikhumba?
Kufuneka ihlale ikhunjulwa ukuba umthunzi wesiseko kufuneka uhlale uhambelana nomthunzi wesikhumba. usebenzisa ukhilimu onjalo, akufanele ukuba naluphi na umzekelo utshintshe umbala, umsebenzi wakho ukukrazula iintsilelo kunye nekhontle yesikhumba. Ukuba unokungabaza ukuba luhlobo luni lwesiseko oluya kuhambelana nombala wakho wesikhumba, kufuneka ukhethe umthunzi omncinane kakhulu. Khumbula ukuba akukaze kulungele ukhilimu, nokuba kunoko umthunzi wayo wawubumnyama ngaphezu kwentamo, amahlombe kunye nezandla. Iimvumba, ezenziwe ngale ndlela, ziya kubonakala zingekho ngokwemvelo kwaye zingcolileyo.
"Isiqhelo" somthunzi wesikhumba nesiseko
Amantombazana anombala wesikhumba obalaphake kakhulu, unokuthi umthunzi omncinci, ufanele uthathe imibala yepereji, ngokubonga ukuba ithoni yesikhumba iya kubonwa njani. Ngendlela, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba yi-shades shades ezingayi kubheka abantu abangaziwayo ebusweni.
Ukuba unemibala emancinci yomhlaba, khetha okubanda kunye ne-shades. Nasiphi na isiseko salo mthunzi ngokukhululeka kuya kwenza ubuso bakho bube nomthunzi omnene ngomsindo omnandi.
Kodwa ukuba unenkcenkceshe engxakini yesikhumba kunye nokuvuvukala, kunye nayo yonke into ebusweni besikhumba, unako ukufumana amahlebezi abomvu nezibomvu kwi-acne, kufuneka uqoke itoni ye-shades epholile enama-green hues. Isiseko esinjalo siza kugubungela yonke indawo yesikhumba apho kukho ukuvuvukala kunye nezibhokhwe.
Ukubunjwa kohlobo lwesiseko kunye nesikhumba
Ukuze ukhethe ukhilimu ofihla ukungafezeki kwesikhumba, kubalulekile ukuqwalasela ukuhambelana kwawo. Ngamabala ahlambulukileyo kunye nemithambo yegazi ebonakalayo, ukhenkethi we-tonal of composition of liquid will help you. Ukubunjwa kwamafutha okomlambo kufihla ngokupheleleyo iimpazamo kunye nefuthe lekhumba elomileyo. Kodwa ukuba unoluhlu lwesikhumba oludibeneyo nolutyebileyo, kufuneka ukhethe isiseko, esingenayo ioli.
I-cream ye-tone yobumbano obunqamlekileyo, njengomgaqo, ekubunjweni kwayo kunomlinganiselo ophezulu weenxalenye zeoli, ngoko ke zilungele ukulungiswa kolu hlobo lwesikhumba olomileyo. Kwaye ngohlobo oluqhelekileyo lwesikhumba, ukhetho olululo luyi-cream day day. Ukhilimu olunjalo luhlaziya ngokugqithiseleyo zonke izigulane zesikhumba kwaye liyona nto ibhetele phantsi kweyiphi na eyenziwe.
Ukukhethwa kwesiseko ngokuhambelana nokufumba
Ukuhlwa kwesohlwaya kuya kukhangeleka ngakumbi ukuba usebenzisa isiseko esiqhakazileyo ngesiseko sesiseko esisezantsi, esinomthunzi ongathathi hlangothi kunye neengqungquthela ezincinci. Isiseko esinjalo sezonalini siya kunika ubuso bakho ngokutsha, ukufihla imiqondiso yokukhathala kwaye ulungelelanise ukukhululeka.
Ngendlela, ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba isiseko, esilungele ngokupheleleyo ithini yesikhumba - sisenza isimo sengqondo esingaqhelekanga, sikhumbuza "umphumo we-mask". Kule meko, kucetyiswa ukusebenzisa ipowder, ene-tinge ephuzi. Oku kubangelwa kukuba kubangelwa ngabantu abaninzi abantu abaluhlaza okwesibhakabhaka kuqulethwe kwisixa esikhulu sokukhansela kwabanye, yingakho ipolisi enjalo ithatha ukwakheka kokubonakala kwendalo kunye nokutshatyalaliswa kwintsha, kungabandakanyi "umphumo wokusasa".
Kwaye ekugqibeleni, ukuba ufuna ukukhetha umthunzi ofanelekileyo wesiseko, kufuneka uhlale ukhetha ukhilimu emini. Ngexesha elisevenkile, zama ukufumana indawo apho ukukhanya okuqhelekileyo kubusa khona. Ungasebenzisi i-backlight ecaleni kwemeko. Faka isicelo sesisiseko kwi-chin yakho kwaye udibanise ngokucophelela, ukhangele indlela ekubonakala ngayo umahluko uma uqhathaniswa nombala wentamo. Yile ndlela uza kukwazi ukuyithatha umthunzi wakho wesiseko.
Iziqhamo ezijongene neziqhamo ekhaya
ULecho we pepper
Ukuhlanjululwa kwiholide zonyaka
Ngaba umntu unobungane abaninzi?
Inkukhu ebisi kunye ne-saffron kunye ne-lemon zest
Isaladi ye-Beetroot kunye nekhukhamba